safaltips Archives - Safal Stories
Home ट्याग Safaltips
असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ? ५ टिप्स
असफलता या सफलता, कुनै पनि जिन्दगीको अन्त्य होइन । सफलता र असफलता त जीवनको एउटा यात्रा हो । जीवनमा कैयौं परिक्षाहरु हुन्छन्...
विद्यालय होस् या कलेज लेभल, विद्यार्थीलाई परिक्षा र नतिजा विशेष हुन्छ । नतिजालाई लिएर विद्यार्थी आफैलाई तनाव त भएको हुन्छ नै, त्यसमाथि...
सफलताको आधार लगनशीलता : कस्तो हुन्छ लगनशील व्यक्ति ?
सफलताको लागि लगनशीलता र धैर्यताको आवश्यकता हुन्छ । लगनशीलता र धैर्यताको कमीले नै धेरै मानिसहरुले आफूले सुरु गरेको काम बीचमै छोड्ने गर्छन्...
मान्छे एक्लै जन्मिन्छ । तर जन्मिसकेपछि विस्तारै अरुको साथ पाउँदै गर्दा ऊ अरुमाथि कामले मात्र नभई भावनात्मक रुपमा पनि परनिर्भर रहन थाल्छन्...
यी ३ कुरा जसले तपाईंलाई जीवनमा असफल बनाउन सक्छन्
हाम्रो प्रगति र खुशीको बाधक हामी आफै हौँ । हाम्रो सोंच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बानी, हामीले लिने निर्णयले हाम्रो सफलता र खुशीमा...
गल्ती भयो ? अब के गर्ने ? सहयोगी टिप्स
गल्ती अपराध होइन । न त यो असफलता नै हो । गल्ती बारम्बार दोहोरियो भने चाहिं अपराध र असफलता दुवै बन्न सक्छ।...